Mayelana NATHI - Hong Bang Packaging Co., Ltd
Hong Bang Ukupakisha Co., Ltd.
esungulwe ngo-2000, ingumkhiqizi onekhono eChina onguchwepheshe bokuphrinta umbala wepulasitiki nokuhlobisa izinto zokupakisha eziguqukayo, amafilimu we-metallized namafilimu asebenza ngemisebenzi eminingi.
Imikhiqizo yethu imboza ukudla, amakhemikhali ansuku zonke, okwenziwa kwemithi, ama-agrochemicals, i-electronics, izinto zokwakha neminye imikhakha. Manje sinezinkampani ezingaphansi ezintathu, i-Hong Bang (Hong Kong) Packaging, i-Hong Bang (i-HUIZHOU), lapho bonke bejabulela ukufinyelela kokuhamba okulula eHong Kong naseShenZhen port.
Kwemboni yethu itholakala HuiZhou.
Uyemukelwa ukuvakashela indawo yethu yokusebenzela engenalo uthuli.
Ifektri yethu ihlangabezana nezinga lokusetshenziswa kwemishini nokuzenzekelayo. Abasebenzi bethu ngokuqeqeshwa kokukhiqizwa kobuchwepheshe, balandela ngokuqinile amazinga wokukhiqiza ukuze basebenze. Manje inkampani yethu ifakwe ulayini wokukhiqiza ongaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili kufaka amaphrinta anemibala eyishumi nane, ama-laminator anejubane elikhulu, imishini yokwenza izikhwama nemishini yokuqopha esebenza ngokuningi.
Izithombe Eziningi Zasefektri
Silalela ngokuqinile uhlelo lwe-ISO9001, i-ISO14001 ne-ISO22000, siphinde sathola amalungelo obunikazi e-BRC, FDA kanye nama-63. Sinikeza izixazululo zokupakisha, ukuklama nokukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yokuphrinta yombala emnandi. Njengoba sikholelwa ukuthi ukuqamba okusha kuzoholela ekusaseni eliqhakazile, sizinikela ekwenzeni ipulatifomu enkulu yocwaningo nentuthuko kanye ne-hi-tech base yezimboni yezinto zephakheji eluhlaza, ngokusebenzisana ngokujulile nezinhlangano eziningi zocwaningo lwesayensi eChina nakwamanye amazwe izinkampani zokupakisha ezaziwayo. Kunikezelwe ekulawulweni kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, abasebenzi bethu abanolwazi bahlala batholakala ukuxoxa ngezidingo zakho nokuqinisekisa ukwaneliseka kwakho. Noma ngabe i-oda lakho lincane noma likhulu, lilula noma liyinkimbinkimbi, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Insizakalo enhle nekhwalithi eyanelisekile ihlale inawe.